Free Thinker: December 2016
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မြန်မာစာ၊ ပြဌာန်းစာအုပ် မှ အမှားများ_4
အောက်ဖော်ပြပါ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ မ ၁၁၀၂၊ အချင်းကဗျာစု၊ ရွေးချယ်ချက်နှင့် ပို့ချချက် စာအုပ်မှ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်မောင်းတစ်မောင်း (ကာချင်း) - ကဗျာမှ
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၁
ဘကောင်းသားလော၊ ဘကောင်း၊ ဘကောင်း
စာမျက်နှာ - ၁၅၊ စာကြောင်းရေ - ၁၅
ဖကောင်းသားလော၊ ဖကောင်း၊ ဖကောင်း
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၄
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၂၂
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၆
စာမျက်နှာ - ၁၆၊ စာကြောင်းရေ - ၄
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၇
စာမျက်နှာ - ၁၆၊ စာကြောင်းရေ - ၁၀
စာမျက်နှာ - ၁၊ စာကြောင်းရေ - ၁၆
စာမျက်နှာ - ၁၇၊ စာကြောင်းရေ - ၁၁
အုံ့ကာမည်း (ကာချင်း) - ကဗျာမှ
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၈
စာမျက်နှာ - ၂၇၊ စာကြောင်းရေ - ၁၅
မြစိမ်းလား သို့၊ မျောက်မြားနှင်နှင်
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၁၄
စာမျက်နှာ - ၃၀၊ စာကြောင်းရေ - ၁၆
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၁၅
စာမျက်နှာ - ၃၀၊ စာကြောင်းရေ - ၁၇
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၁၆
စာမျက်နှာ - ၂၈၊ စာကြောင်းရေ - ၆
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၁၇
စာမျက်နှာ - ၃၀၊ စာကြောင်းရေ - ၁၉
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၁၉
စာမျက်နှာ - ၃၀၊ စာကြောင်းရေ - ၂၁
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၂၁
စာမျက်နှာ - ၂၈၊ စာကြောင်းရေ - ၁၅
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၂၄
စာမျက်နှာ - ၂၉၊ စာကြောင်းရေ - ၂
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၂၅
စာမျက်နှာ - ၂၉၊ စာကြောင်းရေ - ၂၊ ၃
စာမျက်နှာ - ၂၊ စာကြောင်းရေ - ၂၆
စာမျက်နှာ - ၂၉၊ စာကြောင်းရေ - ၁၃
ကဗျာအမှားများမှာမူ အလွန်များလှသည်။ သည်ဆောင်းပါးမျှနှင့် အားလုံးကို ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သီးသန့် စာတစ်အုပ်ရေးမှ ရပါလိမ့်မည်။
ပို့ချချက်ကဗျာများအနက် တစ်မောင်း တစ်မောင်း ကာချင်း၊ အုံ့ကာမည်း ကာချင်း၊ တောဆင်ဖမ်းဘွဲ့ တျာချင်း၊ မောင့်ကိုလွမ်းတော့ အိုင်ချင်း၊ အောက်ပြည်သို့စုန် အိုင်ချင်း၊ ကုန်စင်အောင်မေးခဲ့ပါ အိုင်ချင်းများကို ကျွန်တော့်ရှိ မြန်မာစာ ညွန့်ပေါင်းကျမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့်ပါသည်။
ထိုအခါ ပြဌာန်းစာအုပ်မှ ကဗျာများနှင့် မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းမှ ကဗျာများ ကွဲလွဲနေသည်ကို တွေ့ရပြန်ပါသည်။ အတည်ပြုရန် လုံလောက်သော စာအုပ်စာတမ်းများမရှိသဖြင့် မည်သည်ကမှန်သည်၊ မည်သည်က မှားသည် အတိအကျ မပြောတတ်အောင် ဖြစ်ရပါသည်။
မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း ပထမတွဲတွင် တစ်မောင်း တစ်မောင်း ချီ ကာချင်း၊ မောင့်ကိုလွမ်းတော့ အိုင်ချင်း၊ အောက်ပြည်သို့စုန် အိုင်ချင်းတို့ ပါ၏။
တစ်မောင်း တစ်မောင်း ချီ ကာချင်းမှာ မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းနှင့် ပြဌာန်းစာအုပ် နှစ်ခုလုံး ထပ်တူညီမျှ ဖြစ်ပါသည်။ မောင့်ကိုလွမ်းတော့ အိုင်ချင်း နှင့် အောက်ပြည်သို့စုန် အိုင်ချင်းတို့ကို မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း ပထမတွဲ၊ စာမျက်နှာ ၇ တွင် တွေ့ရ၏။ ခေါင်းစဉ်မပါ။ ရေးသူကိုမူ ရာဇာဓိရာဇ်ကတော်ဖြစ်သည်လိုလို ဖော်ပြထားပါသည်။
မောင့်ကိုလွမ်းတော့အိုင်ချင်းတွင် မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း၌ “သူငယ်ချင်း ငယ်ကောင်း၊ ယောက်မတို့ရှင်” ဟု အစချီထားပြီး ပြဌာန်းစာအုပ်၌ “ချစ်တဲ့သူငယ်လေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်း ယောက်မတို့လေ” ဟု အစချီထားပါသည်။ ကျန်စာသားများမှာ အားလုံးတူ၏။
အောက်ပြည်သို့စုန် အိုင်ချင်းတွင် မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းနှင့် ပြဌာန်းစာအုပ်တို့ အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိရာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဝေးသင် ပထမနှင့် မြန်မာစာ ပြဌာန်းစာအုပ်
စုန်မယ်ဆို စုန်မယ့်ရက်၊ ဆက်ဆက်စုန်
စုန်မယ်ဆို စုန်မယ့်ရက်၊ ဆက်ဆက်မဆို
ခြင်ပုန်းကိုက်လို့၊ ခြင်ထောင်မပါ၊ လေမလာ
ခြင်ပုန်းကိုက်လို့၊ ခြင်ရိုက်မပါ၊ လေမလာ
မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း ပဉ္စမတွဲတွင် အုံ့ကာမည်း ချီ ကာချင်း၊ တောဆင်ဖမ်းဘွဲ့ တျာချင်း၊ ကုန်စင်အောင်မေးခဲ့ပါ အိုင်ချင်းများ ပါသဖြင့် ပြဌာန်းစာအုပ်မှ စာများဖြင့် တိုက်ကြည့်ပါသည်။
အုံ့ကာမည်း ချီ ကာချင်း တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်၌ “စံကားဝတ်စုံမြေ၊ သွန်းညောင်ရေ၊ ထုံလေတန့်စတူး” ဟု ဖော်ပြပါရှိပြီး မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း၌ “စံကားဝတ်စုံမြေ၊ သွန်းညောင်ရေ၊ ထုံလေတန့်စကူး” ဟု ပါရှိပါသည်။
တောဆင်ဖမ်းဘွဲ့ တျာချင်းတွင် ပြဌာန်းစာအုပ်၌ “ကိုးတွင်းကိုးကန်၊ ရေသန်မှန်၊ မန္တာန်မန်းမှုတ်ဆေးပါလို့လေး” ဟု ဖော်ပြပါရှိပြီး မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း၌ “ကိုးတွင်းကိုးကန်၊ ရေသန်မှန်၊ မန္တာန်ပန်းမှုတ်ဆေးပါလို့လေး” ဟု ပါရှိပါသည်။
ကုန်စင်အောင်မေးခဲ့ပါ အိုင်ချင်းတွင် ပြဌာန်းစာအုပ်၌ -
“ကြက်တူရွေးငယ်မှစိမ်းယောင်၊ လေသာတောင်ကို၊ နှစ်မြောင်ခွဲလို့၊ ၀ဲကာဝဲကာ၊ မောင့်နေရာကို၊ ပျံပါတဲ့ချေ၊ ကျေးမြရွှေ၊ . . . . . ပူဆွေးအောင်ပင်၊ လင်းလပ်ဟာကို၊ ရေသာထင်လို့၊ . . . . တစ်မယားနှင့်၊ ရဲစားထွေလို့၊ . . . . ကြေးထမ်းမြှင့်ရှင့်၊ မသင့်ကိုသော့ခါ၊ . . . . ကျီးအက်က၀င်တဲ့လို့၊ ကုန်စင်အောင်မေးခဲ့ပါ၊ . . . . အပျိုဖြူငယ်ကကျွမ်းပါတဲ့၊ လွမ်းတုံ့တင်လေး။ ” - ဟု ဖော်ပြပါရှိပြီး
“ကြက်တူရွေးငယ်မှစိမ်းယောင်၊ လေခေါ်တောင်ကို၊ နှစ်မြောင်ခွဲလို့၊ ၀ဲကာဝဲကာ၊ ပျံပါတဲ့ချေ၊ ကျေးမြရွှေ၊ . . . ပူဆွေးအောင်ပင်၊ လင်းလှပ်ဟာကို၊ ရေသာထင်လို့၊ . . . . တစ်မယားနှင့်၊ ရဲစားတွေ့လို့၊ . . . . ကြေးထမ်းမြှင့်ရှင့်၊ မသင့်လိုသော့ခါ၊ . . . . ၊ ကျီးဘက်က၀င်တဲ့လို့၊ ကုန်စင်အောင်ပေးပါခဲ့၊ . . . . အပျိုဖြူငယ်ကကျွမ်းသည့်၊ လွမ်းတုံ့တင်လေး။ ” - ဟု ပါရှိပါသည်။
ဤသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းနှင့် ပြဌာန်းစာအုပ်တို့ ကွဲလွဲကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကွဲလွဲချက်များအနက် အချို့မှာ ပြဌာန်းစာအုပ် မှန်ပြီး အချို့မှာ မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းက မှန်ပါသည်။ အတိအကျကိုမူ အခြားကျမ်းကြီး ကျမ်းခိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမည်ဖြစ်၏။
နောက်တစ်ခု ထောက်ပြလိုသည်မှာ ဝေါဟာရဖွင့်ဆိုချက်များအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဝေါဟာရများကို ဖွင့်ဆိုရာ၌ အသိရခက်သော၊ အဓိပ္ပာယ်နားလည်ရန် မလွယ်ကူသော ဝေါဟာရများကိုသာ ဖွင့်ဆိုရန် လိုပါသည်။ အများသိနားလည်ပြီးသား ဝေါဟာရများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။ ယခု မြန်မာစာပြဌာန်းစာအုပ်များ တွင်မူ အများ သိပြီးသား ဝေါဟာရများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပြီး အသိရခက်သော ဝေါဟာရများ၊ ရှေးသုံးစကားလုံးများမှာမူ ဝေါဟာရ ဖွင့်ဆိုချက်များတွင် ပါမလာခဲ့ပါ။
ဥပမာပြောရလျှင် ကျစွာမင်း မိထွေးတော်ကျောက်စာ၌ “အိမ်ထောင်”ကို မလိုအပ်ပါဘဲလျက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီး “အာသိန်နှစ်၊” “နံကာလဆန်း” စသည့် သာမန်လူတို့မသိနိုင်သည့် ဝေါဟာရများကိုမူ ရှင်းမထားပါ။
အောက်ပါတို့မှာ မလိုအပ်ပဲရှင်းထားသော ဝေါဟာရများအနက်မှ အချို့ ဖြစ်ပါသည်။
မ ၁၀၀၂ ပို့ချချက်
မိမိကြောင့် . . . . စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သည်။
အပြစ်မယူဘဲ . . . . ခွင့်ပေးသည်။
စိတ်အားလျော့သည် . . . .
အများအားဖြင့် အဆစ်မှ . . . . အလေ့ကျပေါက်ပင်
သစ်ပင်ပန်းမာန် . . . . . ခြံမြေ
အရွက်ခါး၍ . . . . သစ်ပင်တစ်မျိုး
သွေ့ခြောက်သော . . . သစ်ပင်တစ်မျိုး
မ ၁၁၀၂ ပို့ချချက်
အရွက်ကို ထုံး၊ ကွမ်းသီးစသည်တို့နှင့် စားရသော နွယ်ပင်
ရနံ့သင်းပြီး အဖြူရောင် . . . . . . . . ဆူးရှိသော ပန်းပင်တစ်မျိုး
အိပ်နေစဉ် စိတ်၌ ထင်ဟပ်သော အာရုံ
လှပသည့် ရောင်စုံအတောင်ရှိသော . . . . . . . ပိုးကောင်ငယ်တစ်မျိုး
အကြောင်းရှိလျှင်သုံးရန် . . . . . အသင့်ထားရှိသော ပစ္စည်း
ပဲကိုချဉ်အောင်ပြု၍ . . . . . ဟင်းလျာ
လူတိုင်းနားလည်နိုင်သော အထက်ပါဝေါဟာရများကို မလိုအပ်ပဲရှင်းထားသော်လည်း ခက်ခဲသောဝေါဟာရများကိုမူ ရှင်းမထား ကြောင်း အထောက်အထား အနည်းငယ် ပြပါအံ့။
ဖွင့်ဆိုရန် ကျန်ခဲ့သော ဝေါဟာရများ
ဝေဿန္တရာ၊ ဇာလီ၊ ကဏှာစိန်
မ ၁၁၀၁ ရွေးချယ်ချက်
နံနက် လေးချက်တီးကျော်၊ ငါးမောင်းအချိန်
ဝေါဟာရများ၌ စာလုံးပေါင်းများ မှားနေခြင်းမှာ အဓိပ္ပာယ်ကို ပျက်ယွင်းစေသဖြင့် များစွာစိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါသည်။ ဥပမာ -
မ ၁၀၀၁ ပို့ချချက်
မ ၁၀၀၁ လေ့လာမှုလမ်းညွန်
မ ၁၀၀၂ လေ့လာမှုလမ်းညွန်
မ ၁၁၀၄ ပို့ချချက်
၀ါဆိုမာသ= ၀ါဆိုလ(မာလ (၀ါ) လ)
၀ါဆိုမာသ= ၀ါဆိုလ(မာသ (၀ါ) လ)
၀ဲယဉ်သုံးထပ် = . . . ကာလ၀ဋ်
၀ဲယဉ်သုံးထပ် = . . . ကာမ၀ဋ်
ထိုမျှသာမက အချို့ ဝေါဟာရဖွင့်ဆိုချက်များမှာလည်း မမှန်ကန်ပါ။ ဝေါဟာရဖွင့်ဆိုရာတွင် မိမိစိတ်ထင်နှင့် ရမ်းပြီး မဖွင့်ဆိုဘဲ ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်များကို ကိုးကားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ မှန်ကန်သော ဝေါဟာရ ဖွင့်ဆိုချက်များ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မ ၁၀၀၂ ရွေးချယ်ချက်နှင့် ပို့ချချက် စာအုပ် -
မမှန်ပါ။ တစ်ခုခု (မကောင်းတာ) လုပ်ချင်နေခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
မှားပါသည်။ ထိုမယား ဆိုမှ မှန်ပါသည်။
စေတီနှင့် ပြသာဒ်တွင် ထီးအောက်၌ရှိသည့် ငှက်ပျောသီးသဏ္ဌာန် အစိတ်အပိုင်း
ငှက်ပျောသီးသဏ္ဌာန် မဟုတ်ပါ။ ငှက်ပျောဖူးသဏ္ဌာန်သာ ဖြစ်ရပါမည်။ ငှက်ပျောသီးပုံနှင့် ငှက်ပျောဖူးပုံမှာ မတူပါ။
‘နိဗ္ဗာန်’ သည် နာမ် ဖြစ်၍ ‘ကိလေသာ မီးငြိမ်းလေပြီးသော’ သည် နာမ၀ိသေသန ဖြစ်သည်။ နာမ်ကို နာမ်ဖြင့်သာ ဖွင့်ဆိုသင့်၏။
၀ါး၊ နှီးစသည်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော ထည့်စရာ
(ဆယ့်ခြောက်ပြည်ဝင်သော အခြင်အတွယ် ပမာဏ)
ထိုဆောင်းပါးတွင်ပါသော ‘တောင်း’ မှာ တင်းတောင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်မူ၍ (ဆယ့်ခြောက်ပြည်ဝင်သော အခြင်အတွယ် ပမာဏ) ဟု ထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် စာသင်သား တို့အား အယူအဆ မှားယွင်းသွားစေနိုင်ပါသည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ‘ဆယ့်ခြောက်ပြည်ဝင်သော အခြင်အတွယ်ပမာဏ’ မှာ ‘တောင်း’ မဟုတ်။ ‘တင်းတောင်း’ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာအချင်အတွယ် ပမာဏကိုလည်း ၁၆ ပြည် - တစ်တောင်းဟု မရေ။ ၁၆ ပြည် - တစ်တင်း ဟုသာ ရေတွက်ပါသည်။
မ ၁၁၀၁ ရွေးချယ်ချက်နှင့် ပို့ချချက် စာအုပ် -
ကြာရိုးအတွင်းရှိ အလွန်သိမ်မွေ့သော အမျှင်ငယ်
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ မူလဆောင်းပါးပါ ကြာခြည်ရံ နှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်ပါ။ မူရင်း စကားပြေပါ ကြာခြည်ရံ ကိုသာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ကြီးအထက် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောက် ရာထူး
မှားပါသည်။ ဆောင်းပါးမှာ ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်ကဆောင်းပါးဖြစ်၍ ရှေးခေတ် ဗိုလ်မှူးကိုသာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရပါမည်။
စစ်ရေးစစ်ရာနှင့်တကွ . . . အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း
မှားပါသည်။ တပ်ရေးဆိုသည်မှာ ရှေးခေတ်က စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာထူးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့ သော နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရား
မှားပါသည်။ ဘာသာဟူသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည် မှုသာဖြစ်ပြီး တရားတော်မဟုတ်ပါ။
စိန်၊ ကြောင်၊ နီလာ၊ သန္တာ၊ ပုလဲ၊ မြ၊ ဥဿဖရား၊ ပတ္တမြားဟူသော ရတနာကိုးပါး
ရတနာကိုးပါးမပြည့်ပါ။ ၈ ပါးသာရှိသည်။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ ကဗျာများကို ဖော်ပြရာ၌ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြတ်မထားခြင်းဖြစ်၏။ ပို့ချချက်၊ လေ့လာမှုလမ်းညွှန် အားလုံးလိုလိုပင် အမှားများပါနေပါသည်။ နမူနာ အနည်းငယ်ပြပါအံ့။
“မယ်ဘွားမှာလေ၊ ပန်းသပြေ၊ ညောင်ရေသွန်းလောင်း၊ ပြည်ကြီးရှင်
အနိုင်ရလို့ ငါ့သာလှ ပြန်လာကြောင်းကို နေ့တိုင်းပဲ တောင်းရ
- ဟု ဖော်ပြထား၏။ မှားပါသည်။
- ဟု ဖြစ်ရပါမည်။
‘တရားငယ်မှန် ရှင်မြတ်ကယ်ထေရ် အရဟံနှင့် ပြေ(ပြည်) ပုဂံ
ဘုရင် ဘုန်းရယ်ကြောင့် ပြည်လုံးသာယာလို့ သာသနာဝါ၀ါဝင်း
ဤ အဖြတ်အတောက်များလည်း မှားပါသည်။
နောက်တစ်ခု စာမျက်နှာ ၁၃၆ -
‘သည်တောင်သည် မြစ်၊ သည်စနစ်လျှင် စွဲချစ်သည်းပွတ်
သည် ချောင်းသည် တော၊ သည်မြကြောလျှင် သွေးကြော
‘သည်တောင်သည် မြစ်’ ဟု ဖြတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထိုတောင်သည် မြစ်ကြီးဖြစ်သွားပေတော့၏။
ပြောရလျှင် သည်အပိုဒ်တွင် ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်း အကုန်မှားသည်။
‘သည်တောင် သည်မြစ်၊ သည်စနစ်လျှင်
သည်ချောင်း သည်တော၊ သည်မြကြောလျှင်
သွေးကြော သွေးရည်၊ မြသွေးပင်။’ - ဟု ဖြစ်ရပါမည်။
နောက်ပြီး ရေးချများကိုလည်း ချချင်သလို ချသည်။
စာမျက်နှာ ၁၁၀၊ စတုတ္ထစာပိုဒ်တွင် ‘ဓါးထက်သည့် ပုဂံ’ ဟု ဓားကို မောက်ချဖြင့် စာလုံးပေါင်းသည်။ သို့သော် စာမျက်နှာ ၃၂ နှင့် ၁၁၂ တို့တွင် ‘ဓားထက်တဲ့ပုဂံ’ ဟု ၀ိုက်ချဖြင့် စာလုံးပေါင်းသည်။ အမှန်မှာ ‘ဓား’ ဟု ဖြစ်ရမည်။
စာမျက်နှာ ၁၄၄ ဒုတိယပိုဒ်တွင် ‘အဓိပ္ပါယ်’ ဟု စာလုံးပေါင်းထားရာ အမှန်မှာ ‘အဓိပ္ပာယ်’ ဖြစ်ရပါမည်။
မ ၁၀၀၂ ရွေးချယ်ချက်နှင့် ပို့ချချက်စာအုပ် နောက်ဆုံးတွင် အမှားပြင်ဆင်ချက် ထည့်ထားပါသည်။ တကယ့်ကို ဘုရားစူးရပါစေ့ ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့၏ အမှားပြင်ဆင်ချက်ကလေးကို နည်းနည်းလောက် ပြပါရစေ။
၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃
ကျေး၊ သင်၊ နောက်၊ လူ၊ သုံး၊ ကြံ၊ စား
ကျေ၊ သက်၊ နှောက်၊ သူ၊ လုံး၊ ကြုံ၊ စာ
၁၊ ၃၊ ၆၊ ၈၊ ၃၁
နာ၊ အ၊ ပြု
နား၊ တစ်၊ ပြု
ဤသည်မှာ လူပျင်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ပါမည်။
ဤသည်မှာ ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ၌ မည်မျှမှားနေကြောင်း ထောက်ပြချက် အချို့ ဖြစ်ပါသည်။ အခွင့်ကြုံပါက အခြေခံပညာကျောင်းသင်ရိုးစာအုပ်များကို ၀ယ်ယူစုဆောင်းကာ အမှားများ ထပ်မံထုတ်ပြပါဦးမည်။
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ဟူသောစကားသည် ရှိ၏။ အလုပ်ဟူသမျှ ဆိုရာ၌ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ၊ စာရင်းစစ် စသော ရာထူးကြီးများကိုသာ ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ကျောင်းဆရာလည်းပါ၏။ စာရေးလည်းပါ၏။ ရာအိမ်မှူးလည်း ပါ၏။ ဆယ်အိမ်ခေါင်းလည်း ပါ၏။ လယ်သမားလည်းပါ၏။ လမ်းဘေးတွင် တံမြက်စည်း လှဲနေသူလည်းပါ၏။ အိမ်သာဆေးသူလည်း ပါ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူအားလုံးပါ၏။
ရာထူးရှိတိုင်း ဂုဏ်ရှိတာမဟုတ်။ ဂုဏ်နှင့်ရာထူးမှာ မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်။ ဂုဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းမှာ မိမိမည်ကဲ့သို့လုပ်သနည်း ဆိုသည့်အပေါ် များစွာမူတည်နေသည်။
သို့ဆိုလျှင် အဘယ်သို့လုပ်မှ ဂုဏ်ရှိမည်နည်း။ မိမိအလုပ်ကိုမိမိ တာဝန်ကျေပွန်စွာလုပ်မှ ဂုဏ်ရှိမည် ဖြစ်၏။
အိမ်သာဆေးသူသည် သူဆေးရသည့်အိမ်သာကို ပြောင်လက်နေအောင်၊ ဘာအနံ့အသက်မှ မနံရအောင်ဆေးထားခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်သည်။ “ဟေ့၊ ဟောဒီအိမ်သာကို ငါတာဝန်ယူထားတာကွ၊ ဘယ်အချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ပြောင်လက် နေစေရမယ်” ဟု ဂုဏ်ယူနိုင်ရမည်။
ဘယ့်ကလောက်ရာထူးကြီးသော အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ပါစေ။ သူတာဝန်ယူဆောက်သောတံတားမှာ တစ်နှစ်တောင်မခံ၊ ကျိုးပဲ့ အက်ကွဲကုန်သည်။ ပြိုကျသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအင်ဂျင်နီယာသည် အဘယ်ကဲ့သို့ ဂုဏ်ရှိနိုင်ပါမည်နည်း။ အဘယ်ကဲ့သို့ ငါ ဘာအင်ဂျင်နီယာကွဟု လက်မထောင်နိုင်ပါအံ့နည်း။
အကယ်၍ မိမိတာဝန်ယူဆောက်ထားသည့်တံတား အချိန်မတိုင်မီ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားသည့်တိုင် ငါ ဘာအင်ဂျင်နီယာကွဟု လက်မထောင်နေသေးသည်ဆိုအံ့။ ထိုသူကား မွေးကတည်းက ရှက်ကြောဖြတ်ထားသူသာ ဖြစ်ရပေမည်။ (ကျွန်ုပ်က နမူနာ မျှသာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်အကန် ကိုအင်ဂျင်နီယာတို့ နာစရာမရှိပါ။)
မိမိလုပ်ထားသည့်အလုပ်သည် သပ်သပ်ယပ်ယပ်နှင့် မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေမှသာ မိမိအလုပ်အပေါ် ဂုဏ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါလော။
ရာထူးဆိုတာ ကြွားဝါဘို့ ပေးထားတာမဟုတ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာကို ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရာထူးအရ မည်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများရှိသည်ကို သတ်မှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတာဝန်မှာ အဘယ်ဖြစ်သည်ကိုသိလျှက် ထိုတာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်လုပ်မှ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပေမည်။
မည်သူဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေ။ မိမိလုပ်သောအလုပ်ကို တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ မိမိပြုမူသော အပြုအမူကို တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ ယုတ်စွအဆုံး ကွမ်းစားတတ်သည်ဆိုပါက ကွမ်းတံတွေးကို တွေ့ရာမထွေးခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ တာဝန် ယူတတ်ရမည်။ အိမ်သာတက်ပြီး ရေလောင်းချခဲ့ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ် တာဝန်ယူတတ်ရမည်။
ပညာရေးဟူသည် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကို ထူထောင်ရေး၌ အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်၏။ ကျောင်းသင် ပြဌာန်းစာအုပ်မှ စာများမှားလျှင် ကျောင်းသားများကို အမှားကြီး သင်ပေးနေမိပေမည်။ ထိုအမှားမှာ တစ်ယောက်ထဲ မှားတာမဟုတ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှားတာ ဖြစ်၏။
အမှားလုပ်မိတာ အပြစ်မဟုတ်။ အမှားမှန်းသိလျက်နှင့် အမှန်မပြင်တာသာ အပြစ်ဖြစ်ချေသည်။
အမှားကိုမြင်ပါလျက် သည်အတိုင်း မသိယောင်ဆောင်နေခြင်း၊ မျက်စိမှိတ်နေခြင်းသည်လည်း တာဝန်မဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
မိမိအလုပ်ကို တာဝန်ယူတတ်သူများ ဖြစ်ကြပါကုန်လော။
Posted by အေးငွိမျး at 5:26 PM0comments Links to this post
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မြန်မာစာ၊ ပြဌာန်းစာအုပ် မှ ...
Incident Investigation Procedure ကို သက်ငယ်မုဒိမ်း...
ယနေ့ စင်ကာပူရောက်မြန်မာ ၇၀၀၀ နှင့် နိုင်ငံတော်အတို...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထူးချွန်ထက်မြက်အောင် လုပ်နေခြင်းသ...